Home Wararka Dad gaaraya 7 Ruux oo lagu Xukumay Putland
Dad gaaraya 7 Ruux oo lagu Xukumay Putland
Maxkamadda ciidamada qalabka sida shan gobal oo ka tirsan Puntland ayaa maanta xukun dil toogasho ah ku riday saddex nin oo ku eedaysan kamid ahaanshaha ururada Daacish iyo Al-shabaab.
Saddexda xubnood ee dilka lagu xukumay waxaa lagu kala magacaabaa Xassan Laamow Aadan ka tirsan ururka Daacish ,Yaasiin Cismaan Cabdi Saalax ka tirsan ururka Al- shabaab iyo Xassan Maxamed Cali Ibraahim ka tirsan Al-shabaab.
Maxkamaddu waxaa ay sidoo kale xabsi daa’in ku xukuntay saddex nin oo kale oo lagu kala magacaabo Xuseen Jaaylaani, Cabdi Cumar iyo Bishaar kuwaas oo la sheegay in ururka Al-shabaab xubno ka yihiin , iyagoona lagu soo qabtay howlgalo laamaha amaanka ee gobalka Bari sameeyeen .
Xassan Maxamed oo isna kamid ahaa xubnihii maxkamadda la horkeenay ayaa maxkamaddu sheegtay inay aqbashay codsiga qareenkiisa ,kaas oo la xiriiray in baaritaan caafimaad lagu sameeyo si loo hubiyo .
Laba xidigle Maxamed Jaamac oo ka tirsanaa ciidamada Guuto bari kuna eedaysnaa in uu dil gaystay ayey maxkamaddu sidoo kale ku xukuntay shan sano oo xarig ah iyo bixinta makta marxuumka uu dilay.
Previous articleDEG DEG:Kulankii Golaha Shacabka oo baqday
Next articleFaah faahin:Sarkaal Shabaab ka tirsanaa oo lagu dilay Baay
Jubbaland oo Guddi u saartay Xarigii Wasiirka Amniga & Xayiraadii DFS
Golaha Shacabka oo kacabanaya Mushaar la,aan iyo xukuumada oo dhaliil loojeediyay